Eqoshiwe silo Chimera. "Stalker", okuyinto silahlekelwe
Lesi sihloko sichaza indlela ukubheka Chimera ka "Stalker", kungani lesi silo sanqunywa saba kusukela wekugcina, nokuthi namanje ukubona.
Game mayelana post-Apocalypse, ebhubhisa izwe ngaphandle kwabantu noma inhlekelele yembulunga yonke zithandwa kakhulu. Nokho, hhayi kuphela umdlalo. Yiziphi ezinye incwadi uchungechunge ngokuphila ngemva kokuphela kwaleli zwe, okuyinto has eyayibonakala isekude ukuphela. Ithi lapho futhi kungani abantu ngakho kakhulu nomdlandla ofanayo indaba ephathwayo, kunzima, kodwa kuyafaneleka ukuphawula ukuthi indima ebalulekile lokhu kwafeza ingxenye umdlalo efana "Stalker". It ithuthukiswe isikhathi eside, nge "ekuqaleni", futhi abalandeli njalo edwengula izinwele zabo ngenxa engapheli izinsuku ukudluliswa ukukhululwa.
Kodwa ngemva kweminyaka engaphezu kwengu-5 sokulinda, umdlalo namanje wadedelwa. Futhi masinyane izinkundla nemiphakathi amageyimu, abaningi thematic eqala ukudala imicu uthukuthele ukuthi lena akuyona umdlalo base othenjisiwe. Uma sikubeka kalula, ngoba ukuphuma eziningi umdlalo okuqukethwe, kuhlanganise monster efana Chimera. "Stalker", ngaphezu kwakhe, walahlekelwa eziningi imibono ezithakazelisayo futhi imiqondo.
Impendulo olusemthethweni lonjiniyela kwaba ukuthi umdlalo nje waya yokuvumelana emakethe entshonalanga. Empeleni, lokhu kuyinqubo evamile. izikhathi Game kuthiwa okushintshiwe ngezindlela ezincane emazweni ehlukene, futhi yilokho mayelana kusinda wobuciko zilindelwe indawo okungayi usebhekene le nqubo, ngalahlekelwa eziningi imininingwane kanye nokuqukethwe. Futhi kuhlanganise monster efana Chimera. "Stalker" Yebo, namanje eqoqwe imiklomelo eminingi, imiklomelo nezilinganiso omuhle, kodwa inethiwekhi ngezikhathi Kwadlula imiqondo ubudala, imibono kanye amasampula ukuthi wanqunywa.
Ikakhulukazi Stokes modders. Kwavela ukuthi imodeli, imibhalo, ukwakheka, izwi, nokunye - konke wasala umdlalo, kudingeka nje uze ukwazi ukusebenzisa. Omunye Mods bokuqala futhi ukubuya cut izidalwa ezisesimweni sokuguquka, kuhlanganise ezifana Chimera. "Stalker", sibonga ezihlukahlukene Mods uyaphila kube yilolu suku, futhi, ngokungafani nezinye imidlalo, kuye namanje ukukhiqiza ukuguqulwa amateur, omunye kunenye. Futhi ezinye nakakhulu like umdlalo ahlukene - banalo ezahlukene umdlalo injini, njll
Nokho, abaningi bamangala ukubona Chimera. Yachaza e imibhalo kanye imiqondo yentuthuko njengendlela enhle, plastic, nezimo, futhi isilo esiyingozi kakhulu. Futhi umdlalo enikeziwe kuvamise asabekayo engeyinhle, kodwa eqinile. Futhi mhlawumbe lesi esinye sezizathu ezenza ukuba isilo ezifana ukuphuma njengendlela Chimera. "Stalker" Kunoma yikuphi, kwaba sikakhokho lonke uchungechunge imidlalo kanye umqondo ofanayo futhi uchungechunge lwezincwadi.
Indlela yokwenza umnsalo "Maynkraft": isithombe
Amakhodi "GTA San Andreas": ku Ammo, ezempilo nokuningi
Nobani nokuthi kanjani ukulwa I Escapists
Kanjani ukuqala umdlalo ngaphandle kwe-disc, sebenzisa Daemon Amathuluzi Uhlelo Lite?
Konke mayelana nendlela yokulawula isicabucabu "Maynkraft"
Castle of Amboise, France: incazelo, amaqiniso ezithakazelisayo, kobufakazi kanye nokuvakashela
Uyini juice wendlala nokuthi kwaba eqoqwe for ukuhlaziya
Warping kudivayisi ngaphansi kukakhokho uPawulu
UCameron Richardson: Umlingisi waseMelika nomodeli
Utamatisi Green. amalunga
Amagilebhisi Sergeeva Nikolaya Georgievicha: ubuchwepheshe kulinywe nezithombe
Indlela ukukhetha isifutho aquarium?
Izinkinga Global wefilosofi yesimanje uhlola eziyinkimbinkimbi